आरम्भ माइक्रोफाइनान्सले म्यानेजरदेखि ट्रेनीसम्म माग्यो
काठमाडौं। आरम्भ माइक्रोफाइनान्सले प्रबन्धकदेखि प्रशिक्षार्थीसम्मका लागि बिज्ञापन खुला गरेको छ। संस्थाले एक जना प्रबन्धक, एक जना सहायक प्रबन्धक, केही अधिकृत, केही कनिष्ठ अधिकृत, अधिकृत स्तरका केही बरिष्ठ सहायक, सहायक स्तरका केही..
छ वर्षपछि १०-२० लाख पर्यटक रेलबाटै आउँछन्ः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अबको छ वर्षपछि नेपालमा रेलबाट १०-२० लाख पर्यटक नेपाल आउन सक्ने बताएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको पर्यटन क्षेत्रको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी अन्तक्रियामा..
नौ घण्टाको उडानपछि काठमाडौं आइपुग्यो दोस्रो वाइडबडी विमान मकालु
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको दोस्रो वाइडबडी विमान (मकालु) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भर्खरै अवतरण गरेको छ । विमान निर्माण भएको फ्रान्सको तुलुज शहरबाट करीब नौ घण्टाको उडानपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको..
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले माग्यो ५० भन्दा बढी कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले ५० भन्दा बढीको संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले एसिस्टेन्ट लेभलका १४ जना कर्मचारी मागेको छ । लिगल डिपार्टमेन्टका लागि एक जना, रिस्क मेनेजमेन्ट..
मेगा, ग्लोबल आइएमर्इ, गोर्खाज फाइनान्स र आरएमडीसी लघुवित्तमा रोजगारीको अवसर
काठमाडौं। मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमर्इ, गोर्खाज फाइनान्स र आरएमडीसी लघुवित्तले केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालयकालागि कर्मचारी माग गरेका छन्। मेगा बैंकले अफिसर तहका ६ जना कर्मचारी चाबहिल, ओखलढुङ्गा, कालिकोट, कपिलबस्तु, दोलखा, विराटनगरको..
साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ
काठमाडौं। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ। सरोकारवाला निकाय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच भएको वार्तामा विद्यमान ९ हजार ७ सय रुपैयाँमा ३ हजार..
सबै सरकारी कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको..
देउवाले नियुक्ति दिएका दर्जनौ पदाधिकारी, ओली सरकारको एक निर्णयले जागिर गुमाए, को को हुन ?
काठमाडौँ।सरकारले कांग्रेसलार्इ काउन्टर दिँदै देउवा सरकारले सात महिनामा गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बुधवार बसेको बैठकले कांग्रेसलार्इ काउन्टर दिने निर्णय गरेसँगै मध्यरातमा क्याविनेट बसेर..
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले एटिआर–७२–५०० नयाँ विमान भित्र्याएको छ । फ्रान्सको जहाज निर्माता एटिआर कम्पनीबाट खरिद गरिएको उक्त विमान आज साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण..
बैंक तथा बीमा कम्पनीमा जागिरको अवसर, कुन बैंक तथा बीमा कम्पनीले कति कर्मचारी मागे
काठमाडौं। ग्लोबल आइएमर्इ बैंक, सिटिजन बैंक, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले विभिन्न पदमा जागीरका लागि आवेदन खुला गरेका छन्। ग्लोबल आइएमर्इ बैंकले सहायक प्रवन्धक, बरिष्ठ अधिकृत, अधिकृत..
भारी वर्षाका कारण कर्णालीका हवाई उडान बन्द, यात्रु अलपत्र
बाँके । निरन्तर भारी वर्षाका कारण नेपालगञ्जबाट कर्णालीका पहाडी जिल्लाका लागि हुने हवाई उडान सेवा ठप्प भएको छ । आइतबार साँझदेखि शुरु भएको वर्षाले नेपालगञ्जबाट कर्णाली क्षेत्रअन्तर्गतका जिल्लामा हुने सबै हवाई..
कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा आयो, कतिजना पास भए ? (नतिजासहित)
काठमाडौं । सन् २०१९ को लागि लिइएको ईपीएस कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ । ईपीएस कोरिया शाखाले गत जेठ २६ र २७ गते लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको..
नेपाल वायु सेवा निगमको पहिलो वाइड बडी ए ३३०-२०० विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा आज अवतरण
काठमाडौं।नेपाल वायु सेवा निगमको पहिलो वाइड बडी ए ३३०-२०० विमान अन्नपूर्ण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज अवतरण गरेको छ। विमान निर्माण गरिएको फ्रान्सको तुलुजबाट ९ घण्टाको उडानपछि काठमाडौं आइपुगेको हो।गत वैशाखमा निगमले..
महिनाको १८ लाख तलब खाने जागिरबाट पूर्व मुख्यसचिव सुवेदी निकालिए
काठमाडौं । महिनाको १८ लाख तलब सुविधा हुने जागिरबाट पूर्व मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीलाई हटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । बिहीबार बेलुका बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एशियाली विकास बैंकको बैकल्पिक निर्देशकमा सुवेदीलाई..
१० हजार जनाको लागि स्थायी शिक्षकमा जागिर खुल्यो, असार ३० सम्म दर्खास्त दिन सकिने (सूचनासहित)
काठमाडौं । ठूलो संख्यामा शिक्षक पदमा रोजगारी खुलेको छ । प्राथमिक तहका लागि झण्डै ५ हजार पाँच सयजना शिक्षक पदका लागि दर्खास्त आह्वान गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा..
बैदेशिक रोजगारीमा जाने ६ प्रतिशतले घटे, रेमिट्यान्स ७ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको १० महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार यस अवधिमा ६ खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। यो रेमिट्यान्स रकम गत आर्थिक वर्षको..
एक महिनाका लागि सवारी लाइसेन्स बन्द, कहाँ-कहाँ बन्द हुन्छ ? (सूचिसहित)
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिँदै आएको अनलाइन आवेदन फारम बन्द गराएको छ । विभागले एक सूचना प्रकाशन गरेर अनलाइन आवेदन फारम असार मसान्तसम्मका लागि बन्द..
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत आइएलओले पाँच लाखलार्इ रोजगारी दिन सघाउने
काठमाडौँ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्यसहित सञ्चालन हुने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लाई सघाउन नेपालले राखेको प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सकारात्मक देखिएको छ । संगठनको १०७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा..
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढेपछि बढ्यो हवाई भाडा(सूचि सहित)
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि हवाई सेवा प्रदायकले हवाई भाडा बढाएका छन् । नेपाल वायुसेवा संचालक संघले बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य अनुसार हवाई भाडा बढाएका हुन् । बढेको हवाई भाडा मंंगलबारदेखि..
जापानले ५ लाख बढी कामदार लैजाने
एजेन्सी । जापानले कृषि र उद्योगका लागि ५ लाखभन्दा बढी विदेश कामदार भित्र्याउने निर्णय गरेको छ। सिन्जो आबे सरकारले मंगलबार यी दुबै क्षेत्रमा रहेको कामदार अभावलाई पूर्ति गर्न सन् २०२५ सम्म..
नेपाल बैंकले माग्यो विभिन्न जिल्लाका लागि कर्मचारी (सूचनासहित)
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले विभिन्न जिल्लामा रिक्त पदका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको छ । नौं जिल्लामा रिक्त सहायक पदका लागि आवेदन खुल्ला गरेको बैंकले जनाएको छ । थप जानकारीको लागि तलको..
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निमित्त महानिर्देशकमा गोपाल तिवारी नियुक्त
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निमित्त महानिर्देशकमा गोपालप्रसाद तिवारी नियुक्त भएका छन्। सार्वजनिक निजी क्षेत्र, नेपालस्थित विभिन्न दातृ निकाय र सञ्चार क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका तिवारी पछिल्लो समय सरकारद्वारा प्रवर्द्धित..
ओली र मोदीले संयुक्त उद्घाटन गरेको जनकपुर-अयोध्या बस सेवा बन्द
धनुषा। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा हरियो झण्डा देखाएर जनकपुरबाट अयोध्या पठाएको नेपाल–भारत मैत्री बस सेवा अनिश्चितकालका लागि थन्किएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले तामझामका..
नेपाली सेनामा २३ सय ११ जनाको लागि रोजगारीको अबसर, हेर्नुस् सुचना सहित
काठमाडौं। नेपाली सेनाले प्राविधिक सुवेदार, लेखा जमदार कर्मचारी, अमल्दार, सैन्य, सैन्य ड्राइभर, सैन्य वाद्यबादन र फलोअर्स गरी जम्मा २३ सय ११ जनाको लागि विज्ञापन खुला गरेको छ। प्राविधिकको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा..
काठमाडौं। नेपाल बैंक लिमिटडले केन्द्र तथा प्रदेश स्तरमा एक पटक विभिन्न पदमा २७६ जना कर्मचारी माग गरेको छ। बैंकले सहायक प्रवन्धकको लागि ८० जना कर्मचारी माग गरेको छ। त्यस्तै सात वटै..
एनएसी जहाज चढ्ने यात्रुको संख्यामा कमी, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा २७ हजार यात्रु घटे
काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा केही अवरोध आएका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको यात्रु संख्या घटेको छ। लामो समयको अन्तरालपछि अघिल्लो वर्ष निगमको यात्रु संख्या तथा व्यापार राम्रो रहे पनि आर्थिक बर्ष २०७४/७५..
काठमाडौं। कृषि विकास बैंकले दुर्इ वर्षकालागि ९०३ जना सुरक्षाकर्मी माग गरेको छ। बैंकले केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयको लागि २ सय १५ जना कमाण्डर र ६ सय ८८ जना गार्डको माग..
नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी डेढ वर्षभित्र ८ नयाँ विमान खरिद गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले आगामी डेढ वर्षभित्र आठवटा नयाँ विमान खरिद गर्ने भएको छ । निगमले सेवा सुधार्ने कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक सेवा दुवैतर्फ..
मलेसिया जानेको संख्या बढ्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष मलेसिया जानेको संख्या बढेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म मात्र मलेसिया जानेको संख्या एक लाख पाँच हजार ५१..
सार्वजनिक बिदा कटौति, अब ६७ दिन मात्र विदा
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक विदा कटौति गरेको छ। आउँदो साल जम्मा ८९ दिनमात्र सार्वजनिक विदा दिने छ। ६७ दिन सबैका लागि विदा र २२ दिन विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक विदा..
Results 845: You are at page 14 of 29